Xiisada ka jirta xadka Sudan iyo Ethiopia ayaa laga baqayaa in ay isu bedesho gacan ka hadal… – Hagaag.com
Xiisada ka jirta xadka Sudan iyo Ethiopia ayaa laga baqayaa in ay isu bedesho gacan ka hadal…
Afhayeenka rasmiga ah ee Golaha Siyaadada ee Suudaan, Muxammad al-Faki Suleymaan, ayaa sheegay in uusan jirin iclaamin dagaal oo ka dhan ah Itoobiya, halka xiisad ay ka dhex taagan tahay labada dal ka dib iska horimaadyo ka dhacay xuduuda oo ku dhammaaday in ciidammada Suudaan ay dib ula wareegaan aagaggii ay gacanta ku hayeen kooxihii hubeysnaa ee Itoobiya
Suleymaan ayaa wuxuu intaasi ku daray isaga oo ku guda jiray shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Khartuum Jimcihii in Golaha Amniga iyo Difaaca Suudaan uusan ansaxin dagaal ka dhan ah Itoobiya, dalkiisuna uusan rabin sidaasi.
Wuxuu intaas ku daray in ciidamada Suudaan ay fureen dhamaan xuduuda ay la wadaagaan Itoobiya, isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisu uusan u baahnayn cid ku riixda si ay ciidamadooda ugu daadiyaan dhulkooda.
Wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in ciidanka Suudaan aysan ka bixi doonin goobihii ay dib u qabsadeen ayna ilaalin doonaan, isagoo ugu baaqay ciidamada Itoobiya inay ka baxaan laba aag oo kuyaala xadka Sudan oo kala ah Qatran iyo Khawr Omar.
Suleymaan wuxuu sheegay in haddii Suudaan ay dooneyso inay xoog kula wareegto ay sameyn laheyd, laakiin uusan doonaynin in dhibaatada la kordhiyo.
Afhayeenka Suudaan wuxuu beeniyay inuu ogyahay jiritaanka dhex dhexaadin, wuxuuna sheegay in haddii ay dhacdo dhex dhexaadin, dhulku yahay Suudaan, sida uu muujiyeyna aan laga tanaasuli doonin.
Hadalka Al-Faki ayaa yimid labo maalmood ka dib markii Suudaan ay ku eedeysay Itoobiya inay ku soo xadgudubtay hawadeeda, waxayna ka digtay sii socoshada arrinkaasi inuu cawaaqib xumo yeelan karo.
Safiirka Itoobiya u fadhiya Suudaan ayaa dalbaday in ciidamada Suudaan laga soo saaro meelihii ay joogeen ka hor iska hor imaadkii bishii hore ka dhacay aagga Al Fashaqa ee gobolka Gadarif ee ku yaal xadka ay wadaagaan labada dal, wuxuuna ku eedeeyay in ay qabsadeen 9 goobood oo militari oo Itoobiya ah, taas oo Khartuum beenisay.
Mar sii horeysay, Wasiirka Warfaafinta Suudaan ahna afhayeenka dowlada Faysal Muxamed Saalax wuxuu ka jawaabay hadal dowladda Itoobiya ku sheegtay inuu dulqaadka ka dhamaanayo waxa ay ku tilmaamtay ku soo ururinta militariga Sudan ee xuduuda isagoo sheegay in Khartuum aysan doonayn dagaal, laakiin xoogagooda ay ka jawaabi doonaan gardaro kasta.